Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Are you planning for the upcoming summer holidays and thinking of the itinerary? Ukuba ufuna ukukhangela kuba iindleko kakuhle indlela yakho elandelayo ukuqeqesha uhambo, abahamba ngololiwe unako ukulondoloza imali yakho lula. Ukwengeza, ukuba uya kuba uloliwe isihlalo nokubhukisha kwangoko,…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Akukho mntu owaziyo ngokwenene ibali yokwenene chips eFransi. Asinakukwazi qiniseka ukuba avela France, kukonke. Yima, Intoni?! Yeap, uvile ukuba ekunene – kokubini lithanda yaye French Ufune ukutya, and they both have stories to…